Nageenya Itoophiyaa: Shawaa Lixaa aanaa Midaa Qanyiitti qondaalotni mootummaa sadii ajjeefaman – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNageenya Itoophiyaa: Shawaa Lixaa aanaa Midaa Qanyiitti qondaalotni mootummaa sadii ajjeefaman
Nageenya Itoophiyaa: Shawaa Lixaa aanaa Midaa Qanyiitti qondaalotni mootummaa sadii ajjeefaman
Kanneen miidhamanii lubbuun oolan magaalaa Geedootti yaalamaa jiru
Godina Shawaa Lixaa aanaa Midaa Qanyiitti hoggantootni mootummaa sadii hidhattootaan ajjeefamuu mootummaan hime.
Qondaalonni mootummaa ajjeefaman bakka adda addaatti yoo tahu, isaan keessaa tokko dubartii tahuu dubbii himaan Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa Obbo Gizaachoo Gabbisaa himan.
”Konkolaataan osoo deemaa jiraanii, keessaa buusanii, akkaataan itti ajjeesan namummaas sabummaas kan of keessaa hin qabne gara jabinaani,” jedhan Obbo Gizaachoon.
Iddoo dahoo qabatanii bakka humni nageenyaa hin jirretti osoo geejiba uummataan deemanii buusanii karaatti ajjeesaniiru jedhan dubbii himaan kun.
Qondaalonni kunneen Amboo irraa gara aanaa Midaa Qanyiitti osoo imalaa jiranii akka tahe himan. Isaan ajjeefamanis Lammii Gabree, I/Gaafaatamaa IMX aanaa Midaa Qanyii, Daraartuu Tasfaayee, Ijaarsa Paartii Badhaadhinaa aanaa fi Wondimmuu Dhugaasaa, ekispartii Waldaa Hojii Gamtaa aanichaa tahuu, Kominikeeshinii Godina Shawaa Lixaa irraa Obbo Tasfaayee Mirreessaa BBCtti himan.
Dabalataan Obbo Abdannaa Abbishuu, I/Anaa Bulchaa aanaa Midaa Qanyii rukutamanii lubbuun ooluun hospitaala Geedootti wal’aanamaa akka jiran himaniiru.
Dubbii himaan Idil-Adunyaa WBO ajjeechaa qondaalota mootummaa irratti raawwata jedhamuun ittiin himatamnu ni balaaleffanna jedhan.
Aanga’oonni mootummaa yeroo hedduu akka ajjeefaman ni dhageenya kan jedhu Odaa Tarbii, kanaafis qubni nutti qabamaa ture, garuu nuyi gochaa kana ni balaaleffanna jedhe.
”Akka seera keenyaatti aanga’oota mootummaa yoo tahanis, balleessaa qabu yoo jedhamaniyuu isaan irratti xiyyeeffachuun dhorkaadha. Ni balaaleffanna,” jedhe Odaa Tarbii.
Waraanni nuyi gaggeessinu nama nagaa irratti miti jedhe.
Humni qondaalota kanneen ajjeese ”humna ABO Shaneeti” jedhan Obbo Gizaachoon. Qaamni ajjeese jedhanii himatan keessaa to’annoo jala kan ooleeru jiraachuu odeeffannoo gahaa hin qabu kan jedhan Obbo Gizaachoon, aanaalee akka Abuunaa Gindabarat, Jalduu fi kaan keessatti hojiin ol aantummaa seeraa kabachiisuu fudhatamaa jira jedhan.
Humni isaan ”ABO Shanee” jedhan namoota nagaa ajjeesuu, qabeenya saamuu fi mana namaas gubaa jiraachuu himan.
”Haadha daa’imaa hin jedhu, abbaa ijoollee osoo hin jedhiin aanaa Abuunaa Gindabarat keessatti mana tokko keessaa hamma namoota sadiitti kan ajjeesanillee jira. Kan hoggansa mootummaa qofa miti.
Namoota siivilii, barattoota keessas kan ajjeese qaba,” jedhan dubbii himaan paartii Badhaadhinaa Oromiyaa.
Odaa Tarbii amma namoota ukkaamsuun maallaqa gaafachuun bakka baay’ee irraa dhagahama. Qaamni biraa waan akkanaa raawwachuun WBO akka raawwatetti ibsaa turan. Kana ammoo ni balaaleffanna jedhe.
Shawaa Lixaatti tibbana namootni nagaa 20 ol ajjeefamaniiru.
Haleellaa guyyaa Jimaata darbe hammaateen namoota du’aniin alatti, kanneen madaa’an akka jiraniifi hawaasni gandoota baadiyyaa qe’eerraa buqqa’usaanii maddeen BBCn dubbise mirkanneessan.
Jiraattonniifi bulchaan aanichaa akka jedhaniitti, maddi ijoo rakkinichaa erga ‘hidhattoonni Shanee’ saba Amaaraa aanicha keessa jiraatanirratti haleellaa raawwataniin booda jarreen ammoo hawaasa nagaa irratti haleellaa raawwatan jedhan.
Jiraattonni BBC’n dubbise qawween waan irraa funaanameef ofirraa dhorkuu akka hindandeenye yoo himan, Bulchaan Aanaa Obbo Warqinaa Furgaasaa qawween harka hidhattoota ‘Shanee’ akka hin seenneef funaanamuu mirkaneessan.
Bulchaan Aanaa WBOn Booji'amu fi Iccitii wal dhabdee Waraana Mootummaa
Oduu Fulbaana 5,2021-Bulchaan Aanaa WBOn Booji'amu fi Iccitii wal dhabdee Waraana Mootummaa Haacaaluu Caalaa- Gurraale-…
Is Abiy Ahmed trying to make a transfer of power to Amhara from Oromo?
Statement from families of Jawar Mohammed, Bekele Gerba and other Oromo political prisoners